Zingaphi iilitha ezi-1 m3? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Zingaphi iilitha eziku-1 m3?
Umbuzo, Zingaphi iilitha ezi-1m3, kuvela rhoqo kuba siqhelekile kubomi bemihla ngemihla ukujongana neelitha njengeyunithi yomthamo, kwaye sihlawula amanzi kwii-cubic metres. Kunzima kakhulu ukudibanisa amanyathelo aqhelekileyo kunye nalawo angaqhelekanga, nangona ngamnye kuthi unokuyicingela ngokulula imitha ye-cubic-luhlobo lwe-aquarium eneembambo zemitha enye.
Kodwa Zingaphi iilitha ezibandakanyiweyo kumitha enye yeemithaKunzima ukuyithetha kwangoko.
Ngapha koko, lo ngumsebenzi olula, ukuba ukhumbula ukuba i-millilitha enye ihambelana nesentimitha enye. Kwaye ilitha enye ihambelana nee-millilititha ezi-1000, i-1000 yeekhilimitha ezi-1 okanye i-XNUMX ye-cubic decimeter.
Ngenxa yoko, ilitha enye ibandakanya iilitha ezili-1.
Ngoku kuyaziwa kakhulu ukufakela iimitha zamanzi, kwaye kuyo yonke idatha ibhaliwe kwi-m3!
Kutshanje ndidibene nale nto! Ewe, esikolweni andifundanga kakubi, ke ndingaphendula:
1 m3 iqulethe iilitha zamanzi ezili-1000!
Kwiilitha ezili-1000, inamabhakethi amanzi angama-100!
Kwaye kwakhona kunokuthiwa ngokwahlukileyo ... .1000 iilitha = i-5 yemiphanda yamanzi (iilitha ezingama-200)!
Uninzi lwabantu lubeka izixhobo zokubala ukuze zingagqithisi ngaphezulu ... kuba ukuba uthatha umyinge osekwe yinto yokusetyenziswa kwamanzi, uyahlula ngaphezulu!
Inyani yile yokuba zonke izinto ezingamanzi kwilitha enye yeemitha zilingana ngamanani eelitha. Ukuba sithatha amanzi njengomgangatho, oko kukuthi, njengendawo ekubhekiswa kuyo, amanzi ke ziilitha ezili-1000 kububanzi obuyimitha enye.
Ukuba uthatha amanye amanzi, ke aya kuba neelitha ezimbalwa.
Imitha enye yeemitha (1m3) ibandakanya iilitha ezili-1 000. Ke, ukuba uxelelwe ukuba uthatha i-1 cube yamanzi ngosuku, oku kuthetha ukuba yi-100 wder epheleleyo ngosuku. Ke ngoku ungabala ukuba usebenzise amanzi amangakanani ngosuku, kunye nokuba uhlawula malini.
I-4 m3 yamanzi ibekwa umntu ngamnye ngosuku ngamanani ancitshisiweyo.
kwii-1 m3 zilingana neelitha ezili-1000 - quot; iityhubhu ;. Ke i-1 m3 yamanzi = iilitha ezili-1000.
Ke ngoko, sinokuchitha ngokukhuselekileyo kuthi ngokweemitha ezi-XNUMX zamanzi ngosuku, oku kwanele ukupheka kunye nokuhlamba.
Ewe, ukuba uyakhumbula ikharityhulamu yesikolo, isifundo se-physics, umbuzo ophakamayo: ingakanani imitha yobubanzi bamanzi ubunzima, ilitha eyi-1 = 1 kg. amanzi, emva koko iilitha ezili-1000 okanye i-1 m3 = i-1000 kg okanye i-1 toni.
Imibuzo ye-22 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,283.